Koowheel Electric Rubber Quick Start Guide - Jomo Technology Co., Ltd
Koowheel Electric Rubber Quick Start Guide
Isilawuli lights macebiso :
1.Charge salathisi iza kuba xa ugcwalisa
2.Battery ukukhanya Isalathisi ulwalathiso ithetha ukuba elidityaniswe
3.BLUE kuthetha ibhetri RED aphezulu uthetha ibhetri iphantsi
Isalathisi 4.Direction bomvu xa ingene
1. Faka ibhetri ngokuchanekileyo, kunye jija ngezikhonkwane
2.Turn ngomhla wokuqala Remote uze uvule ebhodini ukuze uxhulumane.
3. Push Phambili ngenxa ukukhawulezisa, Sukani Buyela ukuze unyathela.
4. Iimpawu ibhetri Rubber, izibane 4 olungokuveza 100%,
3. Izibane olungokuveza 75%, izibane 2 uthetha-50%, 1 ukukhanya kuthetha 20% ngasekhohlo.
ibhodi yakho Koowheel uye abe namandla. Landela la macebiso ukuqinisekisa amava ekhwele ekhuselekileyo:
Hambisa iqhosha ngokwemizuzu ezincinane.
Gcina isimo ngokubanzi ebhodini,
Gcina iziko esezantsi womxhuzulane.
Ndayame phambili xa uqhu-.
Ndayame umva xa unyathela.
Nxiba A ntloko.
Fumana evulekileyo indawo, amcaba ecocekileyo
LweeNdlela ride yokuqala zakho.
Funda izilumkiso kwi Rubber kwaye ekuqaleni kwale ncwadi.
EZINYE izixhobo kakhulu Kunconywa.
Bathethele iBhodi kunye Tshintsha Battery pack
Light kwi tshaja iya kuba RED xa ugcwalisa, nokuba nisinga GREEN emva igcwaliswe ngokupheleleyo. Tshintsha pack ibhetri xa wayalela enye eyongezelelweyo.
Ngalo lonke ixesha khumbula ukuba qinisa ngezikhonkwane.
Qaphela: Ukuba ibhetri wabeka ixesha elide, kufuneka ukuba ityala ngokupheleleyo, yaye emva koko kwakhona kanye ngenyanga.
Ulondolozo lwemihla ngemihla
1. Qwalasela imeko yamavili ukuqinisekisa ukuba ujikeleza ngokukhululekileyo phambi kokuba ukhwele nganye Qwalasela iilori namavili ukuqinisekisa onke amacandelo ukuba ngokuqinileyo some.
Musa kukhwela ibhodi xa usiva nayiphi na ingxolo engaqhelekanga ukusuka ivili okanye motor iibheringi
2. Soloko uyigcina ibhodi yakho kwiindawo ezomileyo kunye umoya.
Gcina kude kweemeko ezimanzi ukuphepha umonakalo iibhodi PCB kunye ibhetri.
3. kuphela usebenzise Koowheel Charger. Okunye kokuxhuma uncertified kunokubangela imiba yokhuseleko.
Ibhetri kufuneka sihlale apho lobushushu kwiindawo phantsi degrees 60Celsius.
Ukutshaja ibhetri qho kwiinyanga 2-3 xa ibhetri ithe ayasetyenziswa ixesha elide ukuthintela umonakalo ngokusisigxina.
ityala ngokupheleleyo ibhetri ukuze-okokuqala ukusetyenziswa.
Gcina indawo abize kowomileyo kwaye ucocekile, qiniseka izibuko ehlaselayo eyomileyo phambi kwentlawulo nganye.
Ungaze ushiye ibhodi ungajongwangwa ngelixa ukubiza
1. kuphela ukusebenzisa iindawo yantlandlolo ibhodi ukuphepha iingxaki zokhuseleko.
2. Fumana Ziqhelanise imiqathango waqhekeza kwaye uqiniseke kunye nokusebenza unyathela ogqibeleleyo.
3. Oil le iibheringi rhoqo
4. Beginners kufuneka kukhwela ibhodi ngobunono kwindlela kumphezulu egudileyo.
5. Kuphephe indlela emanzi kunye phezu-siqalo.
Rubber zombane * 1 Battery * 1
Umsebenzisi manual * 1 Charger * 1
AC intambo * 1
ibhodi Koowheel ehlanganiswa iwaranti omnye unyaka umenzi e-USA, iwaranti iminyaka emibini lomenzi eYurophu wesilkolo iziphene ngokusetyenzwa kunye eziphathekayo. Oku ayiquki umonakalo obangelwe gadalala, ukungasetyenziswa, ukungakhathali, ingozi, okanye ikhwele emanzini. Battery Isiqinisekiso iinyanga ezintandathu.
BONKE UKUBUYISWA kunye iwaranti SHIPPING :
Nceda ugcine ibhokisi yakho yokuthumela. Le waranti ayibandakanyi umonakalo ukusuka nokuhambisa ukuphakheja ayonelanga.
AMATHUBA UKUFA OKANYE yokulimala kabi
Nanini na ukukhwela ibhodi Koowheel, wena esichengeni ukufa okanye ukwenzakala kakhulu ukusuka ukulahlekelwa lulawulo, yokungqubana, asibekeke. Ukukhwela ngokukhuselekileyo, kufuneka ufunde kwaye ulandele zonke izilumkiso nemiyalelo kule ncwadana yemigaqo.
Nxiba ntloko xa kuhanjwa. Kuphephe amanzi, iindawo ezimanzi, batyibilike / obungalinganiyo, imimango, izithuthi, iintanda, umkhondo, igrabile, amatye, okanye nayiphi na imiqobo ezinokudala ilahleko traction zibangele ukuwa. Kuphephe ukukhwela ebusuku, iindawo kunye ukubonakala amahlwempu, yaye ezincinane.
Isilumkiso: Musa kukhwela ibhodi Koowheel kwiindawo, ngomhla okusenza, okanye ngesantya apho alukwazi olawula i longboard unpowered ubuya. Xa kuthe interferenceor engenazingcingo ibhetri tyala, kuya kufuneka sithembele iZiko loFikelelo olwenziwe Lula ubuchule ezifana footbraking okanye uhambise ukuba ayeke.
ISILUMKISO: UKUPHEPHA AMANZI!
Ibhodi lakho Koowheel bungqina amanzi. Tronics amani-, iibheringi, kunye namanye amacandelo kungenziwa yonakele. Umonakalo Water kungakhankanywanga phantsi kweziqinisekiso.
ISILUMKISO: songe NUMBER!
Gcina iminwe, iinwele, nempahla kude umbhinqo, Motors, amavili, yaye zonke iindawo ezihambayo
ISILUMKISO: UMNGCIPHEKO ugesi!
Musa ukuvula okanye abhucabhuce housings elektroniki, nayo leyo mgodini ngokwewaranti.
WENA KOOWHEEL: Nceda ndikhwele kakuhle kwaye siyabahlonipha abo ngeenxa zonke kuni, bobabini ukhuseleko kwakho ukunceda Ukukhuthaza imidlalo yethu entsha indlela yokuhamba.